जाग युवा देश बनाउन, के बेला भएन र ? - Sawal Media Sawal Media
जाग युवा देश बनाउन, के बेला भएन र ?
आखिर यस्तो कहिले सम्म ? कतिन्जेल सम्म यसरी राज्यको दमन सहेर बस्ने ?
काठमाडौँ – मेरो देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै नाजुक छ । देशमा विकासका पर्वाधार अति नै संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो छैन । राज्यले गरिब जनताको समस्याहरु पनि बुझ्न सकेको छैन । जताततै भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ, चाहे त्यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिकरुपमा रहेका जति पनि विकासका पूर्वाधारहरु छन् समयमा नै सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
-सुदिप नेपाल, लेखक
विकासका पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा कृषिमा नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत निर्भर रहेका छन । तैपनि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र यस क्षेत्रका असिमित समस्या समाधानमा ध्यान दिन नसकेका गुनासोहरु पनि कृषकहरुका छन् । जब कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत जनता कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र आफ्नो मुख्य पेशा बनाउछ भने पकै पनि त्यस देशको मुख्य आयस्रोत पनि त्यही क्षेत्र हुनु पर्ने कुरा सायदैले नकार्ला । त्यसो त हरेक युवाहरुलाइ कृषिको मध्यमबाट रोजगार बन्नु पर्नेमा राज्य सम्यन्त्रको बेवास्ताका कारण हुन सकेको छैन । जसको फल स्वरुप आज हरेक युवाहरु विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन ।
तसर्थ आगामी दिनहरुमा राज्यले कृषि क्षेत्रमा पनि युवाहरुलाइ प्रोत्साहन दिनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको पनि हाल उस्तै छ । शैक्षिक पूर्वाधार विकास देखि शैक्षिक योजन सम्मको विकास हेर्नेहो भने टालो हालेको कपडा जस्तै छ शैक्ष्कि क्षेत्र पनि । जहाँ पर्याप्त र चुस्त नियमण, नियन्त्रण र निगरानी नहुदा हरेक निजी विद्यालयहरुले मनोमानी शूल्क असुली देखी विद्यालय सञ्चालन नै मापदण्ड विपरित गरिरहेको छ्याप्छुयाप्ती देख्न सक्छौँ । जसका कारण गरिब जनताका छोराछोराछोरीहरुको भविष्यमाथी खेलबाड भैरहेको छ । भविष्यमा केही बन्छु भनी अभिभावकले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि आफुहरुले मेहनत र पसिना बगाईरहेता पनि उनिहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन् । यो राज्यको लागि दुखद साथै बिडम्बनाको कुरा हो ।
पछिल्लो समय त केही युवायुवतीहरुले देशको अवस्था र आफ्नो जिवनदेखी हरेश खाइ आत्महत्या पनि गरेका थुपै्र उदाहरण छन् । साथै उनिहरुको सोच विदेश पलायन हुने र भविष्य सुनिश्चित गर्ने हुदा देशमा रेमिटेन्समा त बृद्धि होला तर देशको जनशक्ति विदेश पलायन हुदाँ देशमा हुनुपर्ने समग्र विकासमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ग्रामीण भेगमा रहेका बाँझा जमिन बाँझै रहेका समाचार पनि पढेकै, सुनेकै र देखेकै छौँ ।
हरेक ठाउँमा यस्तै भैरहेको छ । आखिर यस्तो कहिले सम्म ? कतिन्जेल सम्म यसरी राज्यको दमन सहेर बस्ने ? जहिले पनि अस्थिर राजनीति, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अराजकता, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अनि देशका शासन सञ्चालक शौचालय देखी व्यत्तिगत फर्म उद्घाटनमा दौडिने होडबाजिका कारण देशको विकास कन्पनाको महाँसागर बनेको छ ।
तसर्थ राज्यको नितिनियम अझ पारदर्शि र बैधानिक बनाएर सेवा छिटो र छरितो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दतीमा जनता सर्वच्व हुनेमा यहाँ जनताको गुनासोलाई सम्बोधनको सट्टा जनताको बोलिलाई दबाउने गरिन्छ । नेपालमा रहेका श्रोतसाधन लाई व्यवस्थित तरिकाले संरक्षण र उपभोग नगर्दा हरेक ठाउमा चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अझ भन्नै पर्ने हुन्छ देशमा विज्ञता हाँसिल गरेका विज्ञहरुले नै श्रोत साधनको महत्व के हो भन्ने कुराको ज्ञान हाँसिल गरेका छन् भन्दा पनि लाज लाग्छ । यदि विज्ञहरु साच्चिकै विज्ञ हुँदाहुन त त्यसको सदुपयोगले देशले समृद्धिको उचाइ छोइसकेको हुन्थ्यो होला ।
राज्यले गर्न सक्ने थुप्रै कामहरु छन् । जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि थुप्रै काम बन्न सकिरहेका छैनन् । बनेका काम पनि दिगो हुन सकेका छैनन् । देशमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ तर त्यो देशको हितमा, देशको विकासमा, जनता र राज्यको हित हुने उद्देश्यले भएमात्र यसले राज्यको हरेक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ । होइन भने औचित्यहिन, अर्थहिन कार्यशैलीको कुनै कल्याण हुने छैन ।
समाजमा रहेका हरेक कुराको सदुपयोग गरि यसको मह्त्व र फाइदाबारे हरेक नागरिकलाई सचेत गराउनु राज्यको दायित्व हो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । जाग युवा देश बनाउन ।
मेलम्ची १३, सिन्धुपाल्चोक
यो लेख लेखकको आफ्नै व्यक्तिगत धारणा हो ।
नेपाल समुहको माग स्थायी कमिटी बैठक, गुटगत गतिविधि चलाएको ओली समूहको आरोप
टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछानेले भोलिदेखि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दै
सूर्यविनायकको गाई फार्ममा २० वर्षीय युवकको हत्या 61 views
काठमाडौँमा ठूलो हुरीबतास चल्यो 44 views
जनसवाल मिडियाको नयाँ टेलिभिजन कार्यक्रम आउदै 29 views
१ वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने तयारी 23 views
भागबन्डा मिलाउनको लागि तीन मन्त्रालय ‘टुक्रयाइँदै’